Akụkọ - Pee anwụrụ kwesịrị ekwesị maka ngwa ngwa mmiri?
Ndị ahịa anyị ejirila usoro pipeline polyethylene mee ihe maka ị drinkingụ mmiri ọ sinceụ sinceụ kemgbe mmalite ha na 1950s. Industrylọ ọrụ plastik ewerewo ọrụ dị ukwuu n'ịhụ na ngwaahịa ndị e ji mee ihe adịghị emetụta àgwà mmiri n'ụzọ dị njọ.
Ọnwale dị iche iche a na-eme na ọkpọkọ PE na-ejikarị ekpomeekpo, uto, ọdịdị mmiri, na nnwale maka uto nke ụmụ obere mmiri dị na mmiri. Nke a bụ ule dịgasị iche iche karịa ka a na-etinye ya ugbu a na ngwongwo ọdịnala ọdịnala, dịka ọla na ciment na ngwaahịa ndị nwere ciment, n'ọtụtụ mba Europe. N'ihi ya enwere obi ike dị ukwuu na a pụrụ iji pipụ Pee mee maka mmiri na-egbu mmiri n'okpuru ọtụtụ ọnọdụ ọrụ.
E nwere ụfọdụ mgbanwe n'ụdị iwu mba na usoro nnwale dị n'etiti mba ndị dị na Europe. Emeela nkwado maka itinye mmiri n'nu mmiri na mba niile. A nabatara nkwenye ndị a na mba ndị ọzọ dị na Europe ma mgbe ụfọdụkwa n'ụwa niile:
Nnyocha mmiri mmiri na UK (DWI)
France EClọ ọrụ CRECEP de Recherche, d'Expertise et de
E kwesịrị ịhazi ogige anwụrụ PE100 iji mee ihe na ngwa ngwa mmiri. Ọzọkwa PE100 anwụrụ nwere ike arụpụtara si ma-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ nwa compound na-acha anụnụ anụnụ n'ọnyá ịmata ya dị ka kwesịrị ekwesị maka ojiji na mmiri mmiri.
Enwere ike ịnweta ozi ọzọ gbasara nnwapụta maka iji mmiri ọableụ fromụ mee ihe site n'aka onye ọkpọ ọkpọ ọkpọ ma ọ bụrụ na achọrọ ya.
Iji kwekọọ ụkpụrụ na iji hụ na a na-emeso ihe niile eji eme ihe na mmiri ọ drinkingụ drinkingụ n'otu ụzọ ahụ, EAS European Approval Scheme na-etolite, dabere na European Commission
UK Na-arinụ mmiri Inspectorate (DWI)
Jamanị Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW)
Ntụziaka 98/83 / EC. Ndi otu ndi n’etinye aka n’ime mmiri a, ndi RG-CPDW - ndi n’enye ndi n’eme ihe maka iwu ihe owuwu na akuku mmiri a na a Du. Ebumnuche ya na EAS ga-abanye n'ike n'ike na 2006 n'ụdị nwere oke, mana o yighị ka ọ ga-arụ ọrụ nke ọma ruo ụbọchị na-esote mgbe usoro ule dị maka ihe niile.
Onye Ọchịchị EU ọ bụla na-anwale ọkpọ rọba maka mmiri ọ drinkingụ rigụ. Mkpakọrịta nke ndị na - enye ngwaahịa (Plastics Europe) ogologo oge akwadoro iji plastik kọntaktị nri maka ngwa mmiri ọ drinkingụ drinkingụ, n'ihi na iwu kọntaktị nri bụ nke kachasị sie ike iji chebe ahụike nke ndị na-eri ma jiri nyocha toxicological dị ka achọrọ na ntuziaka nke Kọmitii Sayensị nke European Commission. maka nri (otu kọmitii nke EU Food Standards Agency). Dịka ọmụmaatụ, Denmark, na-eji iwu ịkpọtụrụ nri ma na-eji njirisi nchekwa ndị ọzọ. Drinkingkpụrụ mmiri ọ Danishụ Danishụ Danish bụ otu n'ime ihe kachasị egwu na Europe.